1987 – Year – Channel Myanmar
Rouge (1987) Zawgyi******IMDb 7.1 ရရှိထားတဲ့ ခေတ်ဟောင်းကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ...ဟောင်ကောင်အနုပညာလောကရဲ့ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်ခဲ့တဲ့Leslie Cheung ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါ...ဇာတ်ကားလေးနာမည်က Rouge တဲ့.... ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာရူဟွားဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူသခင်လေး ၁၂ ကို လာရှာဖို့ ဟောင်ကောင်မြို့ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်...ရူဟွားအတွက် သခင်လေးကို ရှာဖို့ လူပျောက်ကြော်ငြာထည့်ဖို့တောင်ကြေးပြားမလုံလောက်တဲ့အခါမှာတော့ သတင်းစာတိုက်ကယွမ်ဆိုသူနှင့် ယွမ်၏ချစ်သူ ခြူးတို့နဲ့ သိကျွမ်းခဲ့ပြီးယွမ်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးကပါ ကူညီလာခဲ့တော့တယ်...ရူဟွား သခင်လေး၁၂ အပေါ်ထားတဲ့အချစ်ကဘယ်လောက်တောင် ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာရယ်...ရူဟွားတို့ ပြန်လည် ဆုံတွေ့မှာလား ဆိုတာကတော့... ဇာတ်လမ်းလေး ကြည့်ဖို့လိုမယ်နော်... Translated & Review By Chu ChuEncoded By LK Unicode*******IMDb 7.1 ရရှိထားတဲ့ ခတျေဟောငျးကားလေးနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ...ဟောငျကောငျအနုပညာလောကရဲ့ ဆရာတဈဆူဖွဈခဲ့တဲ့Leslie Cheung ရဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈခုပါ...ဇာတျကားလေးနာမညျက Rouge တဲ့.... ဒီဇာတျကားလေးထဲမှာရူဟှားဆိုတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျဟာ ခဈြရတဲ့ ခဈြသူသခငျလေး ၁၂ ကို လာရှာဖို့ ...
Hamburger Hill (1987) ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ စစ်ကားတစ်ကားပါ။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်က အမေရိကန်နဲ့ ဗီယက်နမ် အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ပွဲအကြောင်းပါ။ Hamburger Hill ဆိုတာကတော့ ရှော တောင်ကြားမှာ ရှိတဲ့ တောင်ကုန်းအမှတ် ၉၃၇ ကို နာမည်ပေးထားတာပါ။ ရန်သူတွေရဲ့ကျည်ဆံကြားမှာ သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့ စစ်သားတွေဟာ ဟမ်ဘာဂါထဲထည့်တဲ့ အသားတွေလို နုပ်နုပ်စဉ်းခံခဲ့ရတာမို့ ဟမ်ဘာဂါ တောင်ကုန်း ရယ်လို့ အမည်တွင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ ဟမ်ဘာဂါတောင်ကုန်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲဟာ မေလ ၁၁ရက်နေ့ကနေ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ၁၀ ရက်တိုင်တိုင် ကြာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးလည်း တော်တော်အထိနာခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲပါ။ အမေရိကန်-ဗီယက်နမ် တိုက်ပွဲတွေထဲမှာ အဆိုးရွားဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ပွဲပါပဲ၊ ဒါကြောင့်လည်း ဒီဇာတ်လမ်း ၁၉၈၀ ခုနှစ်အတွင်း ထွက်ခဲ့တဲ့ စစ်ကားတွေထဲက Platoon တို့ Full Metal Jacket တို့လိုမျိုး အောင်မြင်တဲ့ စစ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟမ်ဘာဂါတောင်ကုန်းကို အပိုင်သိမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ စစ်သား ၁၄ ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို သေချာမြင်ရပါ့မယ်။ ဒါရိုက်တာ John Irvin ရဲ့ လက်ရာမွန်တွေထဲက ...
Beverly Hills Cop II (1987) ပြစ်မူကျူးလွန်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ အက္ခရာကုဒ်တွေချန်ထားတဲ့ဓါးပြတွေကြောင့် Beverly Hills တစ်မြို့လုံး အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်နေပါတယ်။ ဓါးပြတွေကပိုမိုအတင့်ရဲလာပြီး Beverly Hills ရဲဋ္ဌာနရဲ့ကပ္ပတိန် Bogomil ကိုပါ လုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အမူလိုက် Alex Foley တစ်ယောက် ဒီသတင်းကိုကြားကြားချင်းပဲ Detroit ကနေ Beverly Hills ကိုအရောက်လာပြီး အက္ခရာကုဒ်ဓါးပြမူကိုစလိုက်ပါတော့တယ်။ ပထမကားလိုပဲ အမူလိုက်ပုံတွေကို ဟာသနှောတင်ဆက်ထားတဲ့ ရဲဇာတ်မြူးကားလေးပါ။ ရုပ်ရှင်ကားကို Archi Thang Gyi မှ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
The Princess Bride (1987) IMDb- 8.1 Genre- Fantasy/ Romance အချစ်​ရိုမက်​တစ်​ကားကောင်းလေးတွေကိုကြိုက်​တတ်​တဲ့သူများတွက်​ ကားကောင်းလေးတကားနဲ့မိတ်​ဆက်​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ ကားနာမည်​လေးကတော့ The Princess Bride လို့ အမည်​ရတဲ့နာမည်​ကြီးကားလေးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီကားဟာ 1987 ခုနှစ်​ကထွက်​ရှိခဲ့တာဖြစ်​လို့ ကြာညောင်းလှပြီးလို့ထင်​ရပေမဲ့လည်း အခုထိတိုင်​ကြည့်​ရှုသူတွေကို ဖမ်းစားနိုင်​ဆဲပါပဲ။ Rating ကောင်းရတဲ့အချက်​တချက်​ကတော့ ဒီကားကို နာမည်​ကြီးအမေရိကန်​ဇာတ်​ညွှန်းရေးဆရာလည်းဖြစ်​ စာရေးဆရာလည်းဖြစ်​တဲ William Goldman ရဲ့ဝတ္တုဖြစ်​တဲ့ " The Pricess Bride" ကိုအခြေခံပြီးတော့ ရိုက်​ကူးထားခြင်းကပဲ ဒီကားကိုနာမည်​ပိုကြီးစေခဲ့ပါတယ်​။ ဇာတ်​လမ်းအညွှန်း ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အလွန်​ချောမောလှပတဲ့ကောင်​မလေး တယောက်​နဲ့ သူမရဲ့ချစ်​သူကောင်​လေးတုိ့စစ်​ပွဲတွေကြားမှာ ဘယ်​လိုသူတို့ရဲ့အချစ်​ကိုပြသခဲ့ကြခဲ့ပီးတော့ စစ်​ဖြစ်​နေတဲ့တိုင်းပြည်​တွေကိုပြန်​လည်​ပေါင်းစည်းအောင်​ လုပ်​ဆောင်​ခဲ့ကြပုံကိုရိုက်​ကူးထားတာဖြစ်​ပါတယ်​ ......... ဒီကားလေးဟာ ဝင်​ငွေကောင်းခဲ့တဲ့ကားလေးတကားဖြစ်​ပီးတော့ အချစ်​စစ်​အချစ်​မှန်​အကြောင်းရိုက်​ကူးထားတာဖြစ်​လို့ ကြည့်​ရှု့သင့်​တဲ့ကားတကားဖြစ်​ပါကြောင်း.............. အညွှန်းကို Jake က ရေးပေးထားပြီး Nay Chi က ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်
Prison on Fire (1987) Prison on Fire (1987) IMDb - 7.3/10_____Rotten - 87% IMDB 7.3 ရထားတဲ့ ဒီကားလေးကတော့ တရုတျကားလေးပါ၊ Action Drama အမြိုးအစားပါ ၁၉၈၇ ခုနှဈကရိုကျထားတာကွောငျ့ အခုခတျေထောငျကားတှနေဲ့နညျးနညျးကှဲပွားနပေါတယျ ထောငျထဲမှာမိတျဆှဖွေဈသှားပွီး ထောငျထဲရငျဆိုငျရတဲ့အခကျအခဲတှကေိုရိုကျပွထားတာပါ ဒီကားထဲမှာ တရုတျနိုငျငံရဲ့မငျသားကွီး ခြောငျရှနျဖတျနဲ့နောကျတဈယောကျက Leung Ka-fai ကအဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ လူငယျလေးတဈယကျေမတျောတဆလူသတျမိပွီးထောငျကသြှားတယျ လူသဈဆိုတော့ ဝိုငျးအနိုငျကငျြ့တယျ အဲ့ဒါကို ခြောငျရှနျဖတျက ကာကှယျပေးတာပါ ဒီလူငယျလေး ဘယျလိုအနိုငျကငျြ့ခံရတယျ ခြောငျရှနျဖတျကလဲ ဘယျလိုကာကှယိပေးတယျဆိုတာကို ပရိသတျကွီးဆကျလကျကွညျ့ပေးကွပါဦး Quality - 720p Web DL Format - Mp4 Gern - Action/Crime/Drama Duration - 1hr 44min Translator - Tin Myo Lwin Encoder -Kyaw Ye Aung
Love & Passion ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ရှာရင်းဖွေရင်း ဒါရိုက်တာကြီး Tinto Brass ရဲ့ လက်ရာ စုစည်းမှု Tinto Brass Premium Collection ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး ဇတ်ကားကောင်း ၂၂ ကား ပါဝင်ပါတယ် အကုန်လုံးဟာ ရှားရှားပါးပါးတွေ ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ ရုပ်ရှင်တွေဟာတော့ Video Quality အတော်နိမ့်ပြီး 360P လောက်သာ ရှိတာတွေ့ရပါတယ် ထပ်မံရှာဖွေသော်လဲ ယခု ရရှိထားတာလောက် ကောင်းတာကို ရှာဖွေမတွေ့ခဲ့ပါဘူး... Tinto Brass ဟာ မိန်းမကျောနပ်သူလားလို့တောင် ထင်ရအောင် သူရေးသမျှ ရိုက်သမျှ ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းဟာ မိန်းမတွေရဲ့ အကျောကို နားလည်အောင် ဖော်ပြသလို အိမ်ထောင်ရေး အရှုပ်အရှင်း ဇတ်လမ်းတွေ မိန်းကလေး အချစ် ယောင်္ကျားလေး အချစ် နဲ့ တစ်ခါတစ်လေ နားလည်ရခက်တဲ့ အရာတွေကို မြင်ရပါတယ်... Channel Myanmar မှာလဲ Tinto Brass Special Package ဖြစ်အောင် နောက်ဆို တစ်ခုချင်းစီ ၂၂ ကားပြည့်အောင် ဘာသာပြန်ရင်း တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် အခု တော့ ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ Review ကို ခနလောက် ဖတ်ကြည့်ကြစို့...ဖရတ် နဲ့ ဂျနီဖာ တို့ လင်မယားဟာ ခရီးတစ်ခုကို အတူထွက်လာပြီး ဂျနီဖာ ...
Magnificent Warriors (1987) ဒီဇတ်ကားကိုစကြည့်ရတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အ တော်လေးငယ်ပါသေးတယ် မီရှဲယိုကိုအဲဇတ်ကားကနေစပြီးကြိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကားတွေအတော်ကြည့်ဖြစ်တယ် မင်းသမီးမီရှဲယိုဟာကမ္ဘာကျော်မင်းသားကြီးတွေနဲ့အတူတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့ ပြီး အာရှသာမကကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ဦးပါအက်ရှင်တွေသာမကဒရာမတွေပါပိုင်နိင်တဲ့မင်းသမီး ဖြစ်ကြောင်းကို the lady ဆိုတဲ့ဇတ်ကားမှာတွေ့နိင်ပါ တယ် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားမှာလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖူးတဲ့ထိုမင်းသမီးဟာဂျက်ကီချမ်း ဂျက်လီတို့နဲ့အပြိုင်နာမည် ကြီးတဲ့မင်းသမီးတစ်ဦးပါပဲ ဇတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောပြရရင်တော့တရုတ်နဲ့ဂျပန်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမင်းသမီးမီရှဲယိုဟာ မျိူးချစ်တော်လှန်ရေးသမားတစ်ဦးကိုသွားရောက်ကယ်တင်တဲ့ဇတ်လမ်းလေးပါ လမ်းခုလတ် မှာဘာတွေကြုံရမလဲဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ကြုံရမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပါ အက်ရှင်သာမကဟာသလည်းရောနှောပါဝင်တာမို့သေချာပါတယ် cmပ ရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် ကျွန် တော်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဇတ်ကားလေးကိုအကောင်းဆုံးကွာလတီနဲ့ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒေါင်းလော့ဆွဲပြီးသိမ်းထားကြပါလို့ပဲပြောကြားရင်း (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်က ကိုစိုးထွေးပါ) File Size : (680 MB) and (330 MB) Quality : Dvdrip 480p Running Time : 1hr 31minutes Format : Mp4 Genre : Action, Drama Translated By Soe Htwe Encode By Thanhtike Zaw
Eastern Condors (1987) IMDb rating 7.3 ရထားပြီးတော့ ၁၉၈၇ ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ ဟောင်ကောင်စစ်ကားလေးတစ်ကား ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်သားကြီးတွေက တော့မြန်မာပရိတ်သတ် တွေရဲ့ အသဲစွဲမင်းသားကြီး ၂လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ကဲ အဲ့လောက်ဆို ဇာတ်ကားကို ကောင်းမကောင်းသိပ်မညွန်းတော့ဘူးလေ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဗီယက်နမ် ကိုအမေရိကန်က ကျူးကျော် စဉ်ကာလမှာ အမေရိကန်အထွက်မှာ ကျန်ရှိနေခဲ့တဲ့ သူပုန်တွေကိုနိမ့်နင်း တဲ့ မစ်ရှင်တခုမှာ ဟုန်ကျင်းးပေါင် တို့ ၂ယောက်ဘယ်လိုတွေများ ဆက်ဖြစ် ကြမယ်ဆိုတာကို ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါတော့ဗျာ အများကြီးပြောမိရင် spoil မိမှာစိုးတာကြောင့် အမျာကြီးမညွန်းတော့ဘူးဗျ :) ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ ကျော်မျိုးသူဖြစ်ပါတယ်
Evil Dead II (1987) Unicode Evil Dead ကိုတော့ အထူးမိတျဆကျပါနစေရာ လိုမယျမထငျပါဘူး ကနြျောတို့ငယျငယျလေးတုနျးက ကွညျ့ရှု့နှဈခွိုကျခဲ့ရတဲ့ နာမညျကြျော ဇာတျကားတဈကားပါ။နညျနညျးပွနျမိတျဆကျပေးရရငျတော့ ဇာတျလမျးဟာ သခွေငျးရဲ့စာအုပျလို့ချေါတဲ့ စာအုပျနစေတငျတာပါ။ရှေးဟောငျးသုတသေန ပညာရှငျတဈယောကျက ရှာတှပွေီ့းတော့ အိမျလေးတဈလုံးမှာသုတသေနျ လုပျခဲ့ပါတယျ။ မကွာခငျမှာပဲ အဲ့အိမျကို အကျရျှ နဲ့ သူ့ ခဈြသူနဲ့ရောကျလာပွီးတော့ အဲ့ပရျောဖကျဆာ ထားခဲ့တဲ့ သုတသန အသံမှတျတမျးကို တှခေဲ့ကပြါတယျ အဲ့ဒီ့ သုတသေနမှတျတမျးကို ဖှငျ့နားထောငျရာကာနေ ရှေးဟောငျး မှျောဂါထာကို ရှတျဆိုမိသလိုဖွဈပွီး တောနကျထဲက မကောငျးဆိုးဝါးထှကျလာပါတော့တယျ။ ထိုမကောငျးဆိုးဝါးကပဲ အကျရျှရဲ့ကောငျမလေးကိုသတျခဲ့ပွီး အကျရျှလဲ လကျတဈဖကျဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။အဲ့လိုဖွဈနစေဉျအတှငျးမှာပဲ သုတသေနပညာရှငျ ရဲ့သမီးက အဲ့အိမျကို ရောကျလာခဲ့ပါတဲယျ။ဒါပမေဲ့ သူထငျထားသလို သူ့မိဘတှကေို မတှရေ့ပဲ သှေးအလိမျးလိမျးပနေတေဲ့ အကျရျှ ကိုပဲတှလေို့ကျရတဲ့အခါ... အကျရျှတို့ ဘယျလို နားလညျမှု့ရသှားမလဲ...မကောငျးဆိုးဝါးကို ဘယျလို နှငျထုတျမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားဖှယျရာကွညျ့ရမှာပါ။ ဒီဇတျကား ကို ဘာသာပွနျပေးထားသူကတော့ Tariq L Walker ပဲ ဖွဈသလို အညှနျးကိုလဲ ကိုယျတိုငျရေးပေးထားပါတယျ Thit San Khant Zawgyi Evil Dead ကိုတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပါနေစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး ကျနော်တို့ငယ်ငယ်လေးတုန်းက ကြည့်ရှု့နှစ်ခြိုက်ခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကျော် ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။နည်နည်းပြန်မိတ်ဆက်ပေးရရင်တော့ ဇာတ်လမ်းဟာ သေခြင်းရဲ့စာအုပ်လို့ခေါ်တဲ့ စာအုပ်နေစတင်တာပါ။ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်တစ်ယောက်က ...
Project A: Part II (1987) Project A: Part II (1987) IMDb (7.1/10)…..Rotten Tomatoes (71%)ဂကျြကီခနျြးရဲ့ နာမညျကြျော Project A ဇာတျကားရဲ့အဆကျဖွဈပါတယျ။ ပထမကားက အခဲမကွဖွေဈနကွေတဲ့ ရနျသူတှအေပွငျ ခြောကျတှနျးအကှကျခနြတေဲ့ အတှငျးရနျသူတှကေိုပါ တပွိုငျနကျဖွရှေငျးရမယျ့ဇာတျကားပါ။ ဒီဇာတျကားမှာလဲ Action ခနျးတှကေ တဈသကျလုံးအမှတျရနမေိမယျ့ အခနျးတှခေညျြးပါပဲ။ ဟာသရသလဲမွောကျပွီး သရုပျဆောငျတှပေီပွငျမှုကွောငျ့ နှဈမွောပြျောရှငျစှာ ကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျကားပါ။ (Nan Ko Ko Oo မှဘာသာပွနျတငျဆကျထားတာပါ။)ဂျက်ကီချန်းရဲ့ နာမည်ကျော် Project A ဇာတ်ကားရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမကားက အခဲမကြေဖြစ်နေကြတဲ့ ရန်သူတွေအပြင် ချောက်တွန်းအကွက်ချနေတဲ့ အတွင်းရန်သူတွေကိုပါ တပြိုင်နက်ဖြေရှင်းရမယ့်ဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာလဲ Action ခန်းတွေက တစ်သက်လုံးအမှတ်ရနေမိမယ့် အခန်းတွေချည်းပါပဲ။ ဟာသရသလဲမြောက်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေပီပြင်မှုကြောင့် နှစ်မြောပျော်ရွှင်စွာ ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားပါ။ (Nan Ko Ko Oo မှဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားတာပါ။) File size…(910MB) Quality…BR-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….01:45:54 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung